HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Bashkir Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwanyama Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Oromo Ossète Pangasinan Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Swati Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tsonga Turkmène Télougou Valencienne Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Tsia, tsy miresaka momba an’izany ny Baiboly. Tsy hita ao akory aza ilay teny hoe “afofandiovana.” Tsy mampianatra koa ny Baiboly hoe diovina any amin’ny afofandiovana ny fanahin’ny maty. * Andao hojerentsika izay ampianarin’ny Baiboly momba ny ota sy ny fahafatesana. Ho hitantsika koa fa mifanohitra amin’ny fampianarana momba ny afofandiovana izany.
Ny finoana ny ran’i Jesosy no manadio ho afaka amin’ny ota, fa tsy ny fandalovana ao amin’ny afofandiovana. Milaza ny Baiboly fa “ny ran’i Jeso-Kristy [Zanak’Andriamanitra] dia manadio antsika amin’ny ota rehetra”, ary “Jeso-Kristy ... nanasa ny otantsika tamin’ny rany.” (1 Jaona 1:7; Apokalypsy 1:5, Fandikan-teny Katolika) ‘Nahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro’ i Jesosy mba ho afaka amin’ny ota izy ireo.—Matio 20:28, Kat.
Tsy mahatsiaro tena ny maty. “Ny velona mahalala fa ho faty izy; fa ny maty kosa tsy mahalala na inona na inona.” (Mpitoriteny 9:5, Kat.) Tsy mahatsapa na inona na inona ny maty, ka tsy mahatsiaro mijaly na faly rehefa diovina ao amin’ny afofandiovana.
Tsy voasazy noho ny ota intsony ny olona iray rehefa maty. Milaza ny Baiboly hoe “ny fahafatesana no tambin’ny ota”, ary “izay maty dia afaka amin’ny fahotana.” (Romanina 6:7, 23, Kat.) Ny fahafatesana ihany àry no sazy farany noho ny fahotana.
Inona no ampianarina momba ny afofandiovana?
Araka ny fampianaran’ny Katolika, dia mankao amin’ny afofandiovana ny fanahin’ny maty mba hodiovina ho afaka amin’ny fahotany mbola tsy voavela. * Mila diovina ilay fanahy, hoy ny Katesizin’ny Fiangonana Katôlika, “mba hahazo ny fahamasinana ilaina hiarahana mifaly amin’Andriamanitra” any an-danitra. Hoy ihany io boky io: “Antsoin’ny Fiangonana hoe Afo fandiovana izany fanadiovana farany ... izany.” Mampiseho an’izany ny sary ato amin’ity lahatsoratra ity. Tsy fampianarana avy ao amin’ny Baiboly anefa izany.
Avy aiza ilay fampianarana momba ny afofandiovana?
Nino ny Grika fahiny fa misy ny Limby sy ny afofandiovana. Nanaraka ny fisainan’ny filozofa grika i Clément avy any Aleksandria, ka nilaza hoe azo diovina amin’ny afo ny fanahin’ny maty mba ho afaka amin’ny fahotana. Milaza ny The History of Christian Doctrines fa ny Papa Grégoire Lehibe no nanamafy hoe tena marina sy tsy azo iadian-kevitra ny finoana ny afofandiovana. Resahin’io boky io fa i Grégoire, izay papa tamin’ny taona 590 ka hatramin’ny taona 604, no “lazaina hoe ‘mpamorona ny afofandiovana.’” Lasa fampianaran’ny Eglizy Katolika ny finoana ny afofandiovana, ary nomena ny famaritana azy io tao amin’ny Konsilin’i Lyon (1274) sy ny Konsilin’i Florence (1439). Nohamafisina izany tao amin’ny Konsilin’i Trente tamin’ny 1547.
^ feh. 1 Izao no resahin’ilay boky hoe Orpheus: A General History of Religions momba ny afofandiovana: “Tsy miresaka momba an’izany mihitsy ny Filazantsara.” Milaza koa ny New Catholic Encyclopedia hoe: “Rehefa tena dinihina tsara, dia hita fa avy tamin’ny lovantsofina ilay fampianaran’ny Katolika momba ny afofandiovana, fa tsy avy ao amin’ny Soratra Masina.”​—Fanontana Faharoa, Boky Faha-11, pejy 825.
^ feh. 8 Jereo ny New Catholic Encyclopedia, Fanontana Faharoa, Boky Faha-11, pejy 824.
Mety hisy tsara fanahy mankany amin’ny afobe ve? Misy tafavoaka velona avy any ve? Hisy foana ve ny afobe? Mamaly an’izany ny Baiboly.
Hizara Hizara Miresaka Momba ny Afofandiovana ve ny Baiboly?
ijwbq no. 128